Madaxweynaha Faransiiska Oo Booqasho Layaab Leh ku Tagay Boqortooyada Sucuudiga | Awdalmedia.com
Madaxweynaha Faransiiska Oo Booqasho Layaab Leh ku Tagay Boqortooyada Sucuudiga
Arrintan ayaa imaanaysa ka dib markii uu Sabtidii is casilay ra'iisulwasaarihii Lubnaan Saad Hariri isaga oo ku sugnaa magaalada Riyadh, isaga oo sheegay in uu naftiisa u baqay.
Arrintan ayaa durba dhalisay in laga shakiyo in Sucuudigu uu caddaadis ku saaray is casilaaddiisa.
Go'doominta ayaa dalka Yemen la saaray Isniintii ka dib markii gantaal laga soo riday lagu bartilmaameedsaday magaalada Riyadh. Waxaa la sheegay in gantaalka lagu qabtay meel u dhaw caasimadda Sacuudiga.
Qarammada Midoobayna waxay ka digtay "in Yemen ay wajahayso macaluushii ugu ba'nayd ee adduunka soo marta tobannaan sano" haddii aan go'doominta laga qaadin oon la soo celinin gargaarkii dalkaas la gaynayay.